UGrobler ethubeni lokuthatha umklomelo wamagoli
UMGADLI weSuperSport United, uBradley Grobler, usethubeni lokwenza kangcono kunabagadli abathathu abadlule, abagoduke neLesley Manyathela Golden Boot etholwa obashaye bonke amakhanda ngokuhlohla amagoli kwiligi enkulu yePremier Soccer League (PSL).
Kumasizini amathathu adlule umgadli ohambe nalesi sicathulo segolide ukwenze lokhu ngamagoli angu-16. Lesi yisibalo samagoli kaGrobler ngaphambi kokusongwa kwesizini kusasa.
UGrobler ubukeka esendleleni yokwenza kangcono kunoGabadinho Mhango we-Orlando Pirates, Peter Shalulile (esekwiHighlands Park) noMwape Musonda weBlack Leopards, bobathathu abaklonyeliswe ngalesi sicathulo beshaye amagoli angu-16 kumasizini amathathu adlule.
Kusukela ngesizini ka-2011/2012 uMhango, Shalulile, Musonda, Grobler noSiyabonga Nomvete yibona kuphela abagadli abakwazi ukushaya amagoli eligi angu-15 noma ngaphezulu ngesizini.
Njengoba ngeSonto, eGoli, iPSL izobe iklomelisa abenze kahle kule sizini, maningi amathuba okuthi uGrobler kube nguyena ochonywa uphaphe lwegwalagwala ngaphandle-ke uma uShalulile, okunguyena ommise kabi, eshaya amagoli amathathu kowokugcina bese lo mgadli (Grobler) yena angashayi lutho.
UShalulile weMamelodi Sundowns usendaweni yesibili ngawu-13 alandelwe nguThabiso Kutumela weMaritzburg United ngawu-12 bese kubakhona noRuzaigh Gamildien weSwallows oshaye angu-11 noThemba Zwane weDowns oshaye angu-10.
Abaqokiwe bami kanje: